Weerar khasaaro geystay oo ka dhacay Kismaayo | KEYDMEDIA ONLINE
Ugu yaraan Labo ruux ayaa ku geeriyootay, halka Saddex kalana ay ku dhaawacmeen kadib Bambo Gacmeed lagu tuuray goob ganacsi oo ku taallo xaafadda Guulwade ee magaalada Kismaayo, sida goob joogayaal Keydmedia Online u sheegeen.
MUQDISHO,Soomaaliya - Faah-faahino dheraad ah ayaa laga helayaa weerar khasaaro nafeed iyo mid dhaawac ah geystay oo xalay lagu qaaday xaafad ku taallo magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka u ah maamulka Jubbaland.
Ciidamada amaanka ayaa goobta ay wax ka dhaceen baaritaano ka bilaabay, walow aan la sheegin cid loo soo qabtay kiiskaan oo lala xiriirinayo kooxda Shabaab.
Weerarkaan ayaa ku soo aadaya xilli dhawaan ciidamada Nabad Sugida Jubbaland gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan shabakad ka shaqeysa howlgalka Bamba tuurista ee laga fuliyo xaafado ka tirsan magaalada Kismaayo.
Magaalada Kismaayo oo waayihii hore aheyd mid nabdoon ayaa dhawaanahaan isku bedeshay mid uu faraha ka baxay amnigeeda, waxaana xusid mudan in bishii hore qaraxa lagu dilay guddoomiyihii rugta ganacsiga Jubbaland Shaafi Raabi Kaahin xilli uu salaadda Jimcaha ka soo baxay.